ADY AMIN’NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA : ENTANINA NY FOKONOLONA ANY AMIN’NY FARITRA ATSIMO ATSINANANA MIKASIKA IREO VOAFONJA NANDOSITRA :
Mbola misy ireo gadra nandositra notanana tao Farafangana no mbola miafina sy miriaria any anaty fiarahamonina any izay mbola karohin’ny mpitandron’ny filaminana ankehitriny. Heloka bevava vono olona sy heloka goavana no nitanana azy ireo am-ponja, koa manao antso avo ny Ministeran’ny Fitsarana ny amin’ny tokony hiverenan’izy ireny any am-ponja manefa ny saziny. Misy ireo fepetra sy ny lamina hoentina hisamborana azy ireny, izay efa natomboka tamin’ny alalan’ny fampahafantarana sy fampianarana ny olona ny amin’izay tokony atao, raha sendra mifanena na mahafantatra ny toerana iafenan’izy ireny, ary mbola hisy ny lamina vaovao hoentina manatsara izany.
FANOMANANA NY FIDIRANA AN-TSEKOLY NY TAOM-PIANARANA 2020- 2021 :
Nampahafantarina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny lamina hoentina mandrindra ny fidiran’ny mpianatra amin’ny taom-pianarana 2020- 2021.
Toy izao manaraka izao izany :
1- Ho an’ny fisondrotan-kilasin’ny mpianatra :
Ny salanisa azon’ireo mpianatra nandritra ny telovolana roa voalohany no hikajiana sy hitsarana ny vokatra mba hahafan’ireo ankizy misondrotra kilasy.
Ireo afaka fanadinana kosa dia mahazo misafidy ny sekoly idirany, ireo tsy afaka dia mahazo mamerina kilasy. Tsy tokony ho sakana amin’ny fidirana an-tsekoly ny vokatra azon’ny mpianatra tsirairay na ratsy na tsara izany vokatra izany satria zon’ny zaza Malagasy ny miditra an-tsekoly ary mahazo ny fampianarana sy fanabeazana azy ireo ho olom-pirenena.
Tokony hanao ny fisoratana anarana eny anivon’ny sekoly araka izay safidiny ireo ray aman-dreny manomboka ny 16 Septambra ka hatramin’ny 09 Oktobra ankoatra ny kilasy faha 9 sy ny kilasy famaranana izay mbola hiatrika fanadinana.
2- Ho an’ny fitantanana ny tetibola sy ny vola eny anivon’ny sekoly :
Tsy mandoa ny saram-pisoratana anarana ny mpianatra rehetra manerana ny Nosy amin’ity fidiran’ny mpianatra ity araka ny efa nampanantenain’ny Filoham-pirenena .
Tsy mandoa ny latsakemboka angatahan’ny fikambanan’ny ray aman- drenin’ny mpianatra ireo ray aman-dreny manomboka izao, (latsakemboka FEFI) mandra-pisian’ny lamina vaovao mba hitsinjovana ireo tokantrano sahirana sy ny ray aman-dreny izay tena misedra fahasahiranana tokoa amin’izao fotoana izao araka ny toromariky ny Filoham-pirenena nandritra ny Filankevitry ny Minisitra.
Sarahana mazava tsara ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny latsakemboka izay samy sahanin’ny FEFI. Izay tsara ny mampahafantatra fa ny “caisse des écoles” dia izy ireo no mitantana azy ka mitsinjara toy izao : 16,133 miliara ariary natokana ho an’ny EPP sy ny CEG ary 2 miliara ariary natokana ho an’ny Lycée izay miainga avy ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Misy ihany koa ny tetibola izay iarahana mitantana amin’ny ministera sy ireo mpamatsy vola amin’ny alalan’ny tetikasa PAEB mitentina 3 tapitrisa dolara natokana hoan’ny EPP sy CEG .
3- Ho an’ny fandrindrana ny fandalinana any ampianarana :
Hotsinjaraina isaky ny sekoly ireo boky fianarana sy fampianarana ary
ny rakibolana izay efa tody eny anivon’ny CISCO avokoa ankehitriny. Ezahana ny tokony hahaizan’ny ankizy any amin’ny ambaratonga voalohany teny 5 isan’andro mba hitomboan’ny fahaizan’izy ireo araka ny tokony ho izy.
Araka ny fampanantenana nataon’ny Filoham-pirenena dia atao ny fitsinjarana ireo fitaovam-pianarana ho an’ny mpianatra any amin’ny kilasy ambaratonga voalohany ary hisy koa ny fizarana ireo aro akanjo sy ny kiraro entina mianatra mba hitovy lenta avokoa ny mpianatra rehetra miatrika ny taom-pianarana vaovao.
Hisy ny toeram-pamakiam-boky ho an’ireo mpianatra isaky ny lakilasy ary misy ny tetikasa hametrahana tranomboky isaky ny sekoly miaraka amin’ny famatsiam-bolan’ny banky iraisam-pirenena.
Hisy ihany koa ny fampianarana ny ankizy hamboly hazo iarahana amin’ny ministera miahy ny tontolo iainana ka hazo iray ankizy mpianatra iray ary hisy koa ny fanaovana zaridainan-tsekoly iarahana amin’ny ministera misahana ny fambolena ka ahafahan’ny mpianatra mikolokolo sahady ny tontolo iainana sy mikajy ihany koa ny fomba fambolena izay sady hanitaran’izy ireo ny fahalalany.
4- Ho an’ny fanatsarana ny fomba fampianarana :
Hatao ny lamina handrindrana ny fanapariahana ireo mpampianatra manerana ny Nosy izay efa manana ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny fanjakana na izany ireo mpiasam-panjakana na ireo vao nahazo ny taratasy fifanaraham-piaraha-miasa.
Hisy ny tambin-karama omena ieo mpampianatra voatendry any amin’ny faritra alavitry ny renivohitra (prime d’installation).
Hosokafana ireo EPP manarapenitra sy CEG ary Lycée vaovao rehetra efa mijoro manerana ny Nosy. Hisy araka izany ny fandraisana ireo mpampianatra sy tale vaovao any amin’izy ireny.
Tsy maintsy manao fiofanana ary manaraka fanofanana ireo rehetra miditra eo amin’ny sehatry ny fampianarana ary misy ny sivana atao amin’izany ka :
30 taona raha kely indrindra
Olona efa nanaraka lalam-piofanana amin’ny fampianarana
Manana ny mari-pahaizana bakalorea farahafakeliny
Efa niasa nandritra ny 6 taona teo amin’ny sehatry ny fanabeazana
Mahafehy tsara ny teny malagasy sy ny teny frantsay ary manana farafahakeliny ny marim-pahaizana mahafehy teny frantsay
Mahay mifandray aman’olona, mijoro hatrany amin’ny fahamarinana
Mahay na manana ny fahaiza-manao amin’ny fikirakirana ny lafiny solosaina sy ny fifandraisana ary ny serasera mahakasika ny fampianarana
Manana ny traikefa hahatalen-tsekoly ho an’ireo izay vonona ny hitantana sekoly
5- Ho an’ny fandrindrana ny fidirana an-tsekoly :
Noho ny antony ara-pahasalamana dia tsy maintsy hapetraka ny lamina hampidirana ireo zaza ao an-dakilasy ka alefa tsikelikely ny fandraisana azy ireo any antsekoly , izany hoe atao mielanelana ary indrindra manaraka ny lamina ara-pahasalamana izay hapetraka.
Hisy ihany koa ny fanomezana fanafody kakana ireo zaza mpianatra miisa 2,2 tapitrisa ary hisy ihany koa ny fitsirahana ara-pahasalamana izay iarahana amin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.
Araka ny tolo-kevitry ny Ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram- ponenana sy ny asa vaventy :
Nolanian’ny Filankevitry ny Minisitra ny didim-panjakana mamaritra ny filan’ny fanjakana ireo toerana voafaritry ny drafitra fanorenana tanàna ao Toamasina (Plan d’Urbanisme Directeur de l’agglomération de Toamasina).
Atoa RAJAONARISON Jean de Kopy, dia voatendry ho Talem-paritra misahana ny fitantanana ny Fonja ao Atsimo Atsinanana.
M. RAZAFIMAHAFALY Aurélien François Angelot, dia voatendry ho Talem-paritra misahana ny fitantanana ny Fonja ao Amoron’i Mania.
Ramatoa RAZAFITSIMIHANTA Dorcile, dia voatendry ho lehiben’ny Distrikan’i Toliara II.
Atoa ANDRIAMARO Jovin Thomas, dia voatendry ho lehiben’ny Distrikan’Ampanihy Andrefana.
Commissaire Principal de Police RAKOTONDRAHELIARIVELO Mamiarisoa, dia voatendry ho Talem-paritra ao Vakinankaratra.
Atoa RASOLONJATOVO Andriamora Herimirija, dia voatendry ho Tale misahana ny fitantanana ny mpiasa.
Atoa RANDRIAMANANJATOVO Noué Albertrand, dia voatendry ho Tale misahana ny Institut National de la Formation Pédagogique.
M. ANDRIANIAINA Hery Dels, dia voatendry ho Talen’ny Hopitaly manarapenitra ao Antsiranana (Centre Hospitalier Universitaire Tanambao Antsiranana).
Atoa BELALAHY PAULIN Joséphin, dia voatendry ho Tale misahana ny teknolojian’ny fifandraisana sy ny serasera.
Atoa RASAMOELINA Andry Fidiniaina Moîse, dia voatendry ho Tale misahana ny « Unité de Coordination des Organismes Rattachés (UCOR) .
Ramatoa ANDRIAMANOHISOA RAVELOSON Miora, dia voatendry ho Tale misahana ny « Appui à la Promotion de l’Economie Verte et Bleue (DEVB) »
Atoa BERA Arsonina, dia voatendry ho Talem-paritra ao Sofia.
Foana ny didim-panjakana laharana faha 2019-333 tamin’ny 07 martsa 2019 nanendry ny tale misahana ny fitantanana ny mpiasa eo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanonana arakasa.
Natao androany faha 16 Septambra 2020
FAMPIROBOROBOANA NY INDOSTRIA : TAFAJORO ETO TOAMASINA NY OZININA MPAMOKATRA LAFARININA LMOI